Wasiir Sacad Oo Ka Hadlay Goorta La Bilaabayo Dekedii Cusbayd, Jidka Berbera Iyo Wajaale Iyo Wakiilada Dibadda Ee La Isku Bedelay | Biyoguurenews.com
Home Wararka Wasiir Sacad Oo Ka Hadlay Goorta La Bilaabayo Dekedii Cusbayd, Jidka Berbera...
Wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Dr. Sacad Cali Shire, ayaa sheegay ib bisha Oktoobar ee sannadkan la bilaabayo dekedii cusbayd ee ay DP world heshiiska ay Somaliland la gashay ku sheegtay inay dhisayso.
Wasiirka Khaarajiga Somaliland Dr. Sacad oo uu waraysi gaar ah la yeeshay wargeyska Geeska Afrika, waxa kale oo uu ka hadlay halka uu ku dambeeyay jidka isku xidhaya Berbera iyo Wajaale, wakiilada Somaliland ee madaxweynuhu isku bedelay.
Waraysiga uu Geeska Afrika la yeeshay Wasiir Sacad Cali Shire, wuxuu u dhacay sidan:
Mashruucii Berbera Corridor, ee ahaa hirgalinta Waddo isku xidha Berbera iyo Wajaale, oo ku jirtay labadii heshiis ee Dekadda iyo Saldhigaba, ilaa
hadda lama bilaabin, maxa sababay in ilaa hadda la bilaabin?
Mashruucaasi ah waddadii isku xidhaysay Berbera iyo Wajaale wuu socdaa, Shirkad baa qandaraas lagu siiyey inay iyadu xog ururin sameeyso, xogtii wey ururisay, waxay ku jirtaa wali qaabayntii, marka ay qaabayntu dhammaatana qandaraas baa la bixinayaa, markaas kadib ayaa la bilaabi doonaa.
Ilaa hadda Dekaddii Berbera ee cusbayd ee heshiiska Somaliland iyo iyo DP world ku jirtay in la sameeyo ilaa hadda lama bilaabin, maxa hor taagan?
Insha allaahu bisha Octobar ayaa la bilaabi doona Dekadda cusub, sidaas ayaana uu qorshuhu yahay
Saldhigii Milatari ee Imaaradka hawshiisi ka waran?
Dhimsihii Saldhigu wuu socdaa, kolay muddana wuu qaadanayaa.
Sidee ayaad u aragtaa Wakiilada uu Madaxweynuhu u magacaabay iyo Wakiilka Somaliland ee Imaraadka ee Kenya loo bedelay?
Isku bedelida ama bedelaada xilalka dawladda iyo Safiiraddaba, waa dhaqan Caalamka oo dhan ka jira,sida caadiga ahna haddii Safiir dal joogay, dal kale Safiir looga dhigo waa caadi, runtii hadba halka loo wareejiyo ayey waajibaadkoodii shaqo ka qabsanayaan.
Baashe Cawil, oo ahaa wakiilka Somalilland ee UAE waa tan Kenya loo bedelay, bedelkiisu ma kula tahay inuu saamayn ku yeelan karo xidhiidhka labada dal?
Xidhiidhka Somaliland iyo Imaraadku waa mid la dhexeeya laba Wadan, maaha mid ashkhaas ka dhexeeya, labadii Wadana wey jiraan, waligiina Baashe muu ahayn qofka kaliya ee inoo jooga Imaraadka, bedelkiisuna kuma xidhna xidhiidhka labada dal.Wakiiladu wey is bedelaan, balse Wadamadu isma bedelaan, danahooduna isma bedelaan.
Sidee ayaad u aragtaa inuu Madaxweynuhu gacanta dawladda dib ugu soo celiyo Haamihii Shidaalka iyo amaanka Madaarka?
Sida aan filayo arinkaas dadku wey soo wada dhaweeyeen, Madaxweynuhu isaga ayaa dalka ka madaxweyne ah, isaga ayaa hogaanka dalka u haya, wixii uu garto inay gacanta Dawladda dib ugu soo noqdaan, wey ku soo noqon doonaan insha allaaha.
Mar haddii is bedel siyaasadeed ku soo kordhay Wadamada Geeska Afrika,maxa iska bedelay xidhiidhkii Somaliland ee Wadamada Jaarka?
Inagu xidhiidh wanaagsan baynu la leenahay Dalalka jaarka oo dhan, marka laga reebo Somaliya, Dalalka Jabuubti, Itoobiya, Kenya iyo Yugandhaba xidhiidh wanaagsan baa inaga dhexeeya, inagu Geeska ayeynu ku naala, wax kasta oo ka dhacana inaga sameeyn bay inagu leeyihiin, haddii is bedel wanaagsani ka yimaadana wanaagaas wax baa inaga soo gaadhaya, haddii is bedel xumi ka dhacana dhib baa inaga soo gaadhaysa, markaas is bedelka ku saleeysan nabad ku wada noolashaha iyo iskaashiga dhaqaalaha, waa mid aynu soo dhaweeynayo inagu.
Maxa is bedelay xidhiidhka Somaliland iyo Beesha Caalamka?
Somaliland waa wadan ka jira Geeska Afrika, oo Dawlad leh, oo Calan leh, Taariikh leh, dhibaatooyinkii dalkeena ka dhacayna waa qaabkii aynu u maaraynay waa qaab aynu ku kasbanay amaan iyo magac, Caalamkuna wada og yahay,runtiina Caalamka xidhiidh aad u fiican baa inaga dhexeeya,
Maamul Goboleedka Puntland waxay saldhig siiyeen Caare oo ka mid ahaa Ciidamada Somaliland sidee ayaad u aragtaa?
Caare waa nin reer Somaliland ah, jabhadnimada, dagaalka, cunfiga iyo colaadu ma wanaagsana inay dadka sii kala fogeeyaan mooye, wax laga dheefayaa ma jiraan, ee caqliga saliimka ahi wuxuu ku siinaya wixii cabasho ah ee aad qabto inaad si saliima aad u doonto, ee caqliga salaamka ahi inaad qori iyo dhib ku doonto ku siin maayo, colaad iyo qorina waxba laguma faa’iido, ee Caare waxaan leeyahay dadkaaga u naxariiso, jabhaydanta iyo colaadana waxaa wanaagsan in laga waantoobo.
Previous articleMadaxtooyada Somaliland oo Kulan La qaadatay Boodhka Agaasimaha Arimaha Dekada Berbera
Next articleBERBERA Daawo, Gudoomiyaha Xisbiga Ucid ee Gobolka Saaxil oo ka hadlay Xaalada dekada Berbera iyo Arimo kale oo xaasi ahl